Robotrading kana Chinyorwa Trading - Blockchain News
Robotrading ndiye muitiro kushandisa chine mirayiridzo vakagovera vachiriita kutenga kana kutengesa mugove, mari, kana cryptocurrency. Murayiridzo yakatarwa pazvikanganiso siyana pamusika zviratidzi, kusanganisira mutengo, nguva, vhorumu, uye nevamwe. Kana vatengesi vava akaneta uye havana nguva kuchinjanisa manually, kufunga kutamira robotrading. Asi chikumbaridzo kupinda nzvimbo iri kumusoro zvikuru, kunyanya nokuti munhu asina mari kana zvekushandisa dzidzo chaiyo.
About yezwi robotrading uye vakasununguka nguva
Kana private investor chinotarisa purofiti, anonzwisisa musiyano pakati Chinyorwa uye zvoga wokutengesera, uye ane zvimwe zvirongwa unyanzvi, vanofanira kanenge kufunga Kuenda otomatiki njanji. Kubudirira uye kwakaita basa vari kuwedzera: vanhu chete kuita zvakawanda uye nani. Nekutengeserana rwoga unogona kufukidza zvakawanda exchanges, shandisa mimwe midziyo uye zvirongwa. Asi hazvirevi kuti haufaniri kuongorora otomatiki akavhiyiwa akaita Chinyorwa ndivo. Usakanganwa pamusoro zvichiongororwa, zvakakosha nguva dzose kuti tirambe asvinudzwa meso ako.
chero tengeserana, kana Chinyorwa kana algorithmic, Zvinoda kushanda nesimba uye azere kubatanidzwa pakuitika. Kana uchida kuwana, unofanira kupedza nguva yakawanda ari kutengesa. Zvakanakisa, unofanira kuva yakazara kushanda zuva, kana iwe usingagoni chete kunyora bumbiro uye uende dzikama. Ehe saizvozvo, iwe haungaiswi dzakabatanidzwa chete kunzvimbo imwe, uchakwanisa kuenda munyika asi chete kana muri nguva dzose paIndaneti. Asi zvisiri pamusoro avete hamoku pasi nomuchindwe kwemazuva.
About Fiat mari uye cryptocurrency
In mapurogiramu mazwi, hapana musiyano pakati zvauri kutengesa, Fiat mari kana cryptocurrency. The chikuru ndechokuti kusika yakanaka makanika zvokutengeserana hurongwa. Pane algorithms inogona kushandiswa zvinobudirira kana chete kwakajairika dzeEurope, cryptocurrencies, kana unganidza mugove. Hazvina kukosha chii chombo rinoshandisirwa kuti kupinda. Ko nyaya ndechokuti kana kwete mitemo zvakaburitswa ari algorithm rinorondedzera maitiro ari zvakananga yasarudzwa turusi. Saka pano ndiyo nyaya pakutanga wezvokutengeserana pfungwa Pfungwa uye nzira. Chero zvazvingava, kana ane algorithm iri kukura, unhu imwe zvokutengeserana twa inocherechedzwa nhoroondo.
About zvikomborero, nengozi uye zvikanganiso zvoupenzi
The mukana mukuru zvoga zvokutengeserana pamusoro Chinyorwa zvokutengeserana ndizvo kusava nemanzwiro. Vanhu kazhinji kusarudza manzwiro uye manzwiro uye haugari kuva kunobatsirawo pamusoro zvabuda, kunyanya kutsoropodza nguva. Mukupesana ne, ari algorithm kungoti anoita basa rayo pasina chero manzwiro kana mafaro; haina kutora zvechivhurumukira zvisarudzo uye anorega pamusoro zvachose wainyatsotaura nzira. Uye kana algorithm iri rakatanga, kuti muzvinashawo aisagona kupindira uye kushandura chinhu.
Ehe saizvozvo, pane njodzi, uye kazhinji vari pamusika ngozi. The algorithm zvokutengeserana pfungwa anogona kurega kuwana dzimwe nguva apo chero nezvimwewo zviitiko uye nematambudziko musiwa pamusika. marobhoti Most havagoni kuronda chiratidzo. Uchazoti chamber nyaya idzi uye kushandura marobhoti kwako nguva kana chokukuvadza navo. Panewo diki nengozi kuti adzikinure ichavanyengera iwe.
Uyezve, dzimwe nguva programmers aigona kuita zvikanganiso one asi zvakakura. A nyore algorithm ane mutengo uye mutengo. Ehe saizvozvo, kuti mari, mutengo yako inofanira kuva kupfuura mutengo yako. Kana iwe kuvhiringidza, robhoti rako richava maturo. Kazhinji Newbies vanotarisana nechinetso ichi. Semagumo, chikanganiso nyore chaizvo chero rwakazara kunotungamirira zvikuru nezvinhu.
Chero unyanzvi chaizvo vachava chaizvo. Nokutaura chero unyanzvi chaizvo, zvikurukuru kureva ruzivo rwakanaka masvomhu uye pfungwa. Zviri zvakawanda pamusoro pfungwa dzakajeka uye kunzwisisa sei kunyora chakarongwa zvokutengeserana mutemo pane pamusoro masvomhu nokuti havadi chero algebraic transformations panguva mangwanani mumatanho. Pane mutsauko pachena pakati tsitsi sei kuti kuchinjanisa uye kukwanisa kutsanangura kutengeserana nomusoro chakarongwa zvinokatyamadza nezviito. At danho iri, tinofanira kwemasvomhu ruzivo. wo, zvirongwa unyanzvi uye murayiro wose chirongwa mitauro (semuyenzaniso, “ari C”) zvinokosha.
Dzimwe nguva iwe sokuti kukwira aine kunobatsira nzira, hunoshamisa uye kushanda wokutengesera pfungwa. Iwe vanouyera mudenga Modelling chirongwa chipi akarongeka, semuyenzaniso, Mathcad. ndokubva, uchitarisa date, vagoronga date muenzaniso, uye kuti zvaida Masvomhu. Mushure maizvozvo, iwe vanosanganisira vose makomisheni uye surcharges, uye zvose anoshanda wakanaka. Zviya, zvachose, regai mbudzana pachako, vanosanganisira vose kubhadhara, Zvinokosha. Asi zvino iwe unoziva kuti hwokugadzira Implementation pfungwa yako inoda mari yakawanda kupfuura iwe kuwana kubva pfungwa iyi.
Pane imwe nguva, mumwe private investor akaita kwazvo zvokutengeserana robhoti, ainzi Panda. It wakadenha ane 8,000% dzokerai Mutariri weboka mitatu chete anenge asina kutanga ngozi. Panda chakakurukurwa uye hyped zvizhinji, asi chaizvoizvo zvakashanda zvakanaka. Asi chinhu chakanga kuti robhoti akaita mari iyi kubva kwokutanga guta iri 1 churu, apo kutsigira pamwedzi yose hwokugadzira kwezvivako kunodiwa kuraramisa basa mutengo akapoteredza munhu 10 churu. saka, Pakutanga kwaiva maturo chirongwa, nokuti vaisagona kunyange kufukidza mari zvose nokuda magetsi, servers simba uye makombiyuta kuita Masvomhu kuti chirongwa Kunyanya, munhu anofanira kuyeuka kuti robhoti mari havasi yakakwirira nguva dzose, asi mari yokuzvigadzirisa ndiko kubhadharwa zvishoma nezvishoma. saka, zvakakosha exchange kwete chete sei kuti uwane, asi sei iwe kupedza kuti awane.
mari About kutsanya
Zviri pachena kuti marobhoti anogona configured zvakasiyana, zvinoenderana bhuku wezvokutengeserana, chii leverages uye zvikwereti anoshandiswa kana kutengesa, kana ukadyara mari yako kana nokuda munhu, nezvimwewo. Pane vakawanda nuances. Asi vakawanda, unogona kuwana zvishoma nezvishoma gore rimwe nerimwe zvinenge hapana njodzi nekutengeserana kwemakore gumi pa 10% pagore, kana iwe Vangaedza kuchinjanisa gore rimwe pa 100%.
Asi pane mutemo ari pamusika wemari kuti havazokwanisi kubiridzira - dzakanga dzingangoitika kudzoka, kunokonzera zvingakanganisa. Zvinoita simba nokutonga zvitengeswa uye kudiwa. saka, kana iwe kuverenga mari guru, vakazvigadzira guru nezvinhu. Kutonga uku hazvingadziviswi uye zvinofanira kufungwa kana totaura Dzoka inivhesitimendi (Royi) kana algorithmic zvokutengeserana profitability.
About platforms nokuti Newbies
Pane zvimwe platforms kuti kuti munhu kuchinjanisa pasina unyanzvi Trading. Semuyenzaniso, Libertex ndiyo yakakurumbira papuratifomu, asi kune vamwe vazhinji. Chinhu chiito chakanaka kuti Newbie kuedza uye kuona sei mabasa ose.
Kurwisa nezvombo chakaitwa musi Canadian Crypto Exchange
Kurwiswa nezvombo t ...
Previous Post:Blockchain News 24 Ndira 2018
Next Post:Payment opareta mutsetse anoramba Bitcoin